Ixabiso eliphantsi lomthamo wamanqanaba amabini oMatshini wokuTyala abaSebenzi kunye neFektri YiZheng
Yintoni i-Stage ezimbini Umatshini isichumiso Machine?
Inkqubo ye- Amabini-Stage isichumiso isityumzi Machine uhlobo isityumzi entsha ngokulula ingatyumza ukufuma eliphezulu gangue yamalahle, shale, cinder kunye nezinye izinto emva kophando lwexesha elide kunye noyilo ngenyameko ngabantu abavela kuzo zonke iinkalo zobomi. Lo matshini ulungele ukutyumza izinto ezingafunekiyo ezinje ngelahle yamalahle, i-shale, i-slag, i-slag, inkunkuma yolwakhiwo lwe-slag, njl njl. iifektri; isombulula umgangatho wemveliso yegangue, i-shale, izitena, izinto zodonga zokugquma ubushushu kunye nezinye izinto ezinobushushu obuphezulu ekunzima ukuzohlula.
Umsebenzi-uMgaqo weSibini-weSigaba seSichumisi somatshini wokuCoca?
Iiseti ezimbini zeerotors ezidityaniswe kuthotho zenza ukuba izinto zityunyuzwe ngamanqanaba aphezulu aphezulu ngokukhawuleza atyunyuzwe kwakhona yintloko yesando ejikelezayo yenqanaba eliphantsi elijikelezayo. Izinto ezisemqolombeni wangaphakathi zingqubana ngokukhawuleza kunye nokuguqulana ukuze kuphunyezwe umgubo wesando kunye nomgubo wezinto. Okokugqibela, izinto ziya kuthulwa ngokuthe ngqo.
Ukusetyenziswa kwamanqanaba amabini oMatshini wokuCoca umatshini
Imveliso amandla: 1-10t / h
Feed ubungakanani granule: ≤80mm
Izinto ezifanelekileyo: I-asidi yeHumic, ubulongwe benkomo, umququ, umgquba weegusha, umgquba wenkukhu, udaka, intsalela ye-biogas, umgquba wamalahle, i-slag njl.
1. Rotor kabini eliphezulu nezise zigaba ezimbini ezityunyuziweyo.
2. Akukho sikrini, i-grate ephantsi, izinto eziphezulu zokufuma, ungaze uvale.
3. I-rotor ephindwe kabini yokutyunyuzwa, ukuphuma okukhulu, ukukhupha ubungakanani be-particle ngezantsi kwe-3mm, ngaphantsi kwe-2mm accounting engaphezulu kwe-80%.
4. Nxiba into engadibaniyo nesando.
5. Itekhnoloji yohlengahlengiso olwahlukileyo.
6. Izindlu zombane zokuqalisa umbane ngamanzi.
Amabini eSigaba sesichumiso Isityumzi somatshini weVidiyo
Amanqanaba amabini oMatshini wokuCoca uMatshini wokukhetha
Ubungakanani besondlo (mm)
Ubungakanani bokukhutshwa (mm)
Egqithileyo Nkqo Chain isichumiso isityumzi Machine
Okulandelayo: Double-asi Chain isityumzi Machine isichumiso isityumzi